विश्वकै वृद्ध प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड राख्दै ९२ वर्षका बृद्ध प्रधानमन्त्री बन्दा छायो यस्तो खुशी « Janaboli
विश्वकै वृद्ध प्रधानमन्त्रीको रेकर्ड राख्दै ९२ वर्षका बृद्ध प्रधानमन्त्री बन्दा छायो यस्तो खुशी
एजेन्सी । विश्वमा नै राज्यको नेतृत्व गर्ने नेता युवा हुनुपर्छ भन्ने माग बढिरहेका बेला विश्वकै विकसित मुलुक मलेसियामा भने त्यसको उल्टो भएको छ । मलेशियाले विश्वकै बृद्ध प्रधानमन्त्री भएको मुलुकको रेकर्ड राखेको छ । मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले आम चुनावमा ऐतिहासिक जित हासिल गरेसँगै यो रेकर्ड कायम भएको हो । यसमा जनता अत्यन्तै खुशी छन् ।
मलेसियाली चुनाव आयोगका अनुसार महाथिरको विपक्षी गठबन्धनले चुनावमा ११५ सिटमा जित हात पारेको छ । मलेसियामा सरकार बनाउन ११२ सिट आवश्यक पर्छ । ९२ वर्षीय महाथिर मोहम्मले बारिसन नेसनल (बीएन) गठबन्धनलाई नराम्रोसँग हराएका छन् । पार्टी पछिल्लो ६० वर्षदेखि सत्तामा रहेको छ । जितपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै महाथिरले भने, ‘हामीले कुनै पनि बदला चाहेका छैनौँ, हामी त कानुनी शासन मात्रै ल्याउन चाहेका हौँ ।’ उनका अनुसार बिहीबार सपथग्रहण हुनेछ । सपथग्रहणपछि महाथिर विश्वकै वृद्ध निर्वाचित नेता हुनेछन् । सपथग्रहण समारोहका लागि बिहीबार र शुक्रबार मलेसियामा सार्वजनिक बिदा दिइएको छ ।
मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै महाथिरका समर्थक सडकमा विजयोत्सव मनाइरहेका छन् । बीएन तथा प्रमुख पार्टी संयुक्त मेलेसिया राष्ट्रिय संगठन ९यूएमएनओ० सन् १९५७ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्रता पाएसँगै सत्तामा रहेको थियो । तर केही सालदेखि यसको लोकप्रियता कम हुँदै गइरहेको थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप उसले आम चुनावमा ७९ सिटमा जित हात पार्यो । सन् २०१३ को चुनावमा विपक्षी पार्टीले लोकप्रिय मत प्राप्त गरे पनि सरकार बनाउन भने सफल भएन । यसपल्ट महाथिर मोहम्मदले प्रधानमन्त्री नजीक रजाकविरुद्ध आक्रामक रुपमा प्रचार गरेका थिए । महाथिर मोहम्मद आफै पनि बीएनका हिस्सा रहेका थिए । उनी नजीबको राजनीतिक गुरु पनि हुन् । तर उनले पार्टी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै आफूलाई पार्टीबाट अलग गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘जुन पार्टी भ्रष्टाचारको समर्थन गर्छ उसँग रहनु भनेको अपमानित हुनु हो ।’ महाथिर मोहम्मदलाई आधुनिक मलेसियाका निर्माताका रुपमा चिनिन्छ ।
तपाईलाई थाहा छ ? ओबामा हरेक दिन १० वटा पत्र आफै पढ्थे केहीको जवाफपनि आफै दिन्थे !
काठमाडौं । विश्वकैं शक्ति राष्ट्र अमेरिकी पुर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा आफैंमा एक आर्दश व्यक्ति मानिन्छन
अहिलेसम्मकै शक्तिशाली ८.२ म्याग्निच्युटको भूकम्प गयो : पुरै पृथ्वी फाटेको हवाई दृष्य
काठमाडौ । अत्यन्तै शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । फिजीमा केन्द्रविन्दु रहेर गएको भूकम्पको तीव्रता ८
हवाई कारबाहीमा २२ लडाकू मारिए
कलात । अफगानिस्तानको जाबुल प्रान्तमा भएको हवाई कारबाहीमा परी कम्तीमा २२ लडाकू मारिएका छन् ।
क्रिकेटका कप्तानले लिए प्रधानमन्त्रीको सपथ : देखियो यस्तो दृष्य, दुनियाँको ध्यान तान्ने दिए यस्तो भाषण !
कराँची । पाकिस्तानी जनताले आफ्नो १८ औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा पुर्व क्रिकेटर इमरान खानलाई पाएका छन